मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक : अधिनायकवादको प्रयास
रिपोर्ट नेपाल | 2019 May 13 | 08:02 pm	828
सरकारले यही वैशाख २६ गते मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने के होला ? यसको हेक्का थोरैले मात्रै राखेका छन् । अर्थात् सत्तारुढदलका झन्डै बाहेक आम पत्रकारहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू तथा केही राजनीतिकदलहरुले मात्रै यो विधेयकले निम्त्याउने अधिनायकवादको हेक्का राखेका छन् ।
आम नागरिकहरूले भने यो पत्रकारको मात्रै मामिला हो कि ? भन्ने ठानेको देखिएको छ । पत्रकारिता बाहेक अन्य पेसागत सङ्घ संस्थाहरूले यस बारेका बोलेका छैनन् । यो विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुन्छ भन्ने कुरा धेरैले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् तर प्रेस स्वतन्त्रता हननले पुर्‍याउने नोक्सानी पत्रकारिता पेसामा लाग्नेहरूलाई मात्रै हो कि ? सबैलाई हो ? भन्ने कुरामा केही भ्रम रहेको देखिन्छ ।
कसरी कुण्ठित हुन्छ प्रेस स्वतन्त्रता ?
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कसरी कुण्ठित गर्छ ? र प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित भयो भने आम नागरिकको मौलिक हकमा के कति असर पर्छ ? भन्ने कुरालाई यर्थात परक ढङ्गले जनताबीच लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रेसलाई राज्यको चौथो अङ्ग भनिन्छ । अर्थात् कार्यपालिका , व्यवस्थापिका र न्यायपालिका पछि राज्यको सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग स्वतन्त्र प्रेसलाई मानिन्छ । तर सरकारले अहिले ल्याएको विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउने गरी सरकारले अहिले विधेयक ल्याएको छ ।
विद्यमान नेपाल प्रेस काउन्सिल र प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलमा के के भिन्नता हुने छन् त ? भन्ने कुराले नै पत्रकार जगत तथा नागरिक समाजले उठाएका जिज्ञासाको उत्तर प्राप्त हुन्छ । पहिलो भिन्नता , प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष बन्ने योग्यता सर्वोच्च अदालतको अवकाशप्राप्त न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा लामो समयदेखि पत्रकारितामा लागेर ख्याति कमाएको हुनुपर्ने भनेर तोकिएको छ तर प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलका लागि स्नातक तह उत्रिर्णगरी कम्तीमा १० वर्ष पत्रकारिता गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । जसका कारण सत्तारुढ पार्टीका सी ग्रेडका झण्डे कार्यकर्ता मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष बन्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ ।
यसै गरी विद्यमान प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षलाई उसको कार्यकाल भरी सरकारले हटाउन नसक्ने प्रावधान छ तर प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षलाई सरकारले चाहेको बेला हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधानका कारण आफ्नो पदको निरन्तरताका लागि मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षले सरकारको निर्देशन मान्नै पर्ने बाध्यता उत्पन्न हुन्छ । विधेयकको परिच्छेद –३, दफा १० को उपदफा १ ले काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि चार वर्ष तोकेको भए पनि उपदफा २ भन्छ ‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले देहायको अवस्थामा अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदावधि सकिन अगावै पदबाट हटाउन सक्नेछ र पाँच अवस्था मध्ये ‘ख’ मा उल्लेख छ – ‘काम सन्तोषजनक नभएमा’ ।
यसको सोझो अर्थ हुन्छ काउन्सिलले ‘मिडियाको काम’ होइन ‘मन्त्रीको मनोविज्ञान’ बमोजिम काम गर्नुपर्नेछ । अन्यथा ‘काम सन्तोषजनक नभएको’ अभियोगमा तत्काल बर्खास्त व्यहोर्नु पर्नेछ । यसरी शिरमा पदमुक्तको भय झुण्ड्याएर काउन्सिलले कसरी परिणाममुखी र सन्तोषजनक कार्य गर्न सक्दछ ?
के हो प्रेस स्वतन्त्रता ?
अहिले पनि आमनेपालीहरूको बुझाइ प्रेस स्वतन्त्रता भनेको पत्रकारका लागि मात्रै हो कि ? भन्ने देखिएको छ । यो भ्रमलाई चिर्न सरकारी स्तरमा त प्रयास भएन, भएन स्वयं पत्रकारहरूका अनेकौँ नामका सङ्घ संस्थाले पनि प्रयास गर्न सकेको देखिएन ।
सरल भाषामा भन्नुपर्दा आम नागरिकले आफ्नो आवाज मिडियामार्फत अभिव्यक्त गर्न पाउने, कहीँ कतै अङ्कुश नलाग्ने अधिकार नै प्रेस स्वतन्त्रता हो । अर्थात् आमनागरिकको आवाज प्रेसमार्फत लिपिबद्ध भएर सबैले बुझ्ने भाषामा अभिव्यक्त गर्ने काम मिडियामार्फत हुनु नै प्रेस स्वतन्त्रता हो । प्रेस स्वतन्त्रता भनेको नागरिकका लागि हो भन्ने कुरा स्वयं सिद्ध तथ्य हो । पत्रकार भनेका त माध्यम अर्थात् औजार मात्रै हुन् । प्रेसमार्फत जनताले एकातिर आफ्नो धारण अभिव्यक्त गर्छन्, अर्कोतिर अरूको भावनाबारे सुसूचित हुन्छन् । जनअधिकारको उत्तम स्वरूप भनेको प्रेस स्वतन्त्रता हो । जहाँ प्रेस स्वतन्त्रता हुँदैन त्यहाँ जनअधिकार हुँदैन । प्रेस स्वतन्त्रता विना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुँदैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विना लोकतन्त्र हुँदैन । लोकतन्त्रविना जनअधिकार हुँदैन ।
नेपालका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्ने हो भने प्रेस स्वतन्त्रता भनेको पत्रकारहरूको लागि मात्रै हो भन्नु आमजनबुझाइ छ । कतिपय मिडियाकर्मी पनि यही भ्रममा छन् । जसरी पावर हाउसमा जलविद्युत् उत्पादन हुन्छ । तारको माध्यमबाट त्यो विद्युत् जनताको घरमा पुगेर उज्यालो दिन्छ । तार भनेको माध्यम मात्रै हो मुख्य कुरा उत्पादन र प्रयोग हो । त्यसरी नै पत्रकार भनेका माध्यम मात्रै हुन् । लोकतान्त्रिक संविधानमा अभिव्यक्ति तथा सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको हुन्छ । त्यो मौलिक हक पत्रकारको माध्यमबाट जनताले उपभोग गर्छन् । जसलाई प्रेस स्वतन्त्रता भनिन्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता केवल पत्रकारका लागि नभएर आमनागरिकका लागि हो तर आमनागरिकका तुलनामा पत्रकारको स्वार्थसँग प्रेस स्वतन्त्रता केही बढी जोडिएको कुरा भने सत्य हो । प्रेस स्वतन्त्रतामा पत्रकारहरूको व्यवसाय फस्टाउँछ । जहाँ प्रेस स्वतन्त्रता हुन्छ त्यहाँ मिडिया क्षेत्रमा व्यावसायिक लगानी भित्रिन्छ । मिडिया क्षेत्रमा व्यावसायिक लगानी भित्रिनु वा बढ्नु भनेको पत्रकारहरूको रोजगारी बढ्नु हो । यही स्वार्थका लागि पत्रकारहरूले प्रेस स्वतन्त्रतालाई विशेष जोड दिने गरेका हुन् ।
सूचना प्रविधिको विकासले फड्को मारेसँगै मिडिया क्षेत्रमा विविधता आएको छ । यस हिसाबले नेपालको वर्तमान पुस्ता धेरै भाग्यमानी छ । विश्वका अन्य मुलुकहरूमा अखबार प्रकाशित हुन थालेको करिब चार सय वर्षपछि मात्रै नेपालमा अखबार प्रकाशित हुन थालेको हो । विश्वका अन्य मुलुकमा रेडियो प्रसारण हुन थालेको दुई सय वर्षपछि मात्रै नेपालमा रेडियो प्रसारण हुन थालेको हो । विश्वका अन्य मुलुकमा टेलिभिजन प्रसारण हुन थालेको ५० वर्षपछि मात्रै नेपालमा टेलिभिजन प्रसारण हुन थालेको हो । तर अनलाइन र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भने विश्वका सबैभन्दा विकसित मुलुकका जनताले र नेपाली जनताले सँग सँगै प्रयोग गर्न पाए । अब अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई राज्यले चाहेर पनि निस्तेज गर्ने अवस्था रहेन । तर नेपालका सत्ता सञ्चालकहरूले यो यर्थाथतालाई आत्मसाथ गर्न नसकेका हुन् कि जस्तो देखिएको छ ।
अहिले ओली सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकको मात्रै कुरा होइन , गत भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी देवानी संहिता, फौजदारी संहिता सम्बन्धी ऐनलाई लिन सकिन्छ । यो ऐनका विभिन्न दफाले प्रेसलाई संकुचित बनाउने प्रयास गरेको छ । यो प्रयास विरुद्ध पत्रकारहरूले आवाज नउठाएका होइनन् । तर सर्वसाधारण तथा नागरिक समाजका अगुवाबाट आवाज उठेको सुनिँदैन । यो मामिला केवल पत्रकारको मात्रै होइन भन्ने कुरा दलका नेता कार्यकर्ता , नागरिक समाजका अगुवा तथा सर्वसाधारणले अझै पनि बुझेको देखिँदैन ।
गत आम निर्वाचनको चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा नेपाली काँग्रेसले भनेको थियो –‘कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत भएको सरकार बन्यो भने लोकतान्त्रिक मूल्यहरू क्रमशः खतरामा पर्नेछन् ।’ धेरैले यसलाई चुनावी भाषणका रूपमा मात्रै बुझे । कतिपयले आरोप प्रत्यारोपको अर्थ लगाए । तर एक वर्ष पुग्दा नपुग्दै ओली सरकारले अधिनायकवादी चरित्र प्रदर्शन ग¥यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका सारा संयन्त्रहरू आफ्नो सिधा नियन्त्रणमा लिँदै गए । जुन कुरा प्रेस जगतले चरणवद्ध रूपमा बाहिर ल्यायो । अधिनायकवादको प्रयासमा प्रेस जगत कवाफमा हड्डी बनेर धोखा प¥यो । अनि प्रेसलाई अङ्कुश लगाउने गरी कानुन बनाउन ओली लागे । भएको यही हो । संविधान र मानव अधिकार घोषणापत्रले तय गरेका मान्यता प्रतिकुल सञ्चार ऐनहरू बनाएर प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निस्तेज र नियन्त्रण गर्ने यो शृङ्खला भनेको अधिनायकवादका लागि मार्ग निर्माण गर्ने प्रयास हो ।
तर ओलीको यो प्रयास सफल हुने वाला छैन । किन पनि छैन भने , नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै नलेखिएर ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लेखिएको छ । यसको सुस्पष्ट अर्थ हो नेपालको प्रेस जगतलाई नियमन गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि ढङ्गले असर पुर्‍याउन पाइन्न । नेपाली काँग्रेसको सरकारका पालामा प्रेस काउन्सिल ऐन ०४८ निर्माण भएको थियो जसको प्रस्तावनामै काउन्सिललाई स्वायत्त र अर्धन्यायीक संस्थाका रूपमा उल्लेख गरी सोही अनुरूप यसको औचित्य स्थापित गरिएको छ । तर संसद्मा प्रस्तुत पछिल्लो विधेयकले प्रस्तावनाको त्यो परिच्छेद हटाएर स्वायत्तता र अर्धन्यायीक स्वरूपको सोझो समाप्ति सुनिश्चित गरेको छ ।